Fitaovana fampitaovana sy fametahana, mpamatsy - Mpanamboatra kojakoja fampiasa ao Shina
Amin'ny maha iray amin'ireo mpifaninana mpifaninana indrindra an'ny orinasa anay, ny valindrihana valindrihana dia natao hametahana takanty na tehina ho an'ny hazo, valindrihana na rindrina. Ary nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao izy ireo, indrindra any Amerika Avaratra. Ary koa, misy fitsaboana isan-karazany amin'ny safidinao: efa vita mialoha, Zinc plated, epoxy ary Green vita amin'ny galvanized hamaly ny filan'ireo anticorrosion isan-karazany.
Volom-baravarana kofehy namboarina miaraka amin'ny voanjo
Amin'ny maha iray amin'ireo mpifaninana mpifaninana indrindra an'ny orinasa anay, ny kofehy U-bolt misy ny voanjo dia natao ho an'ny General Piping Applications. Ary nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao izy, indrindra tany Amerika Avaratra, Amerika atsimo, Moyen Orient, Eoropa ary Azia. Azafady, mariho tsara fa misy voanjo roa isaky ny lafiny.
Amin'ny maha iray amin'ireo mpifaninana mpifaninana indrindra an'ny orinasa anay, ny mpampifandray ny vodin-tsika dia natao hametahana ny tsorakazo amin'ny sisin'ny hazo sy rindrina. Ary nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao izy ireo, indrindra any Amerika Avaratra. Ary koa, misy fitsaboana isan-karazany amin'ny safidinao: efa vita mialoha, Zinc plated, epoxy ary Green vita amin'ny galvanized hamaly ny filan'ireo anticorrosion isan-karazany.
Amin'ny maha-iray amin'ireo mpifaninana mpifaninana indrindra amin'ny orinasa, dia nekena ny clamp avo indrindra ataontsika. Ary nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao izy ireo, indrindra any Amerika Avaratra, Amerika atsimo, Moyen Orient, Eoropa ary Azia. Ary koa, misy fitsaboana isan-karazany amin'ny safidinao: efa vita mialoha, Zinc plated, epoxy ary Green vita amin'ny galvanized hamaly ny filan'ireo anticorrosion isan-karazany.
Paded Mounting Pad
Amin'ny maha iray amin'ireo mpifaninana tena mifaninana indrindra amin'ny orinasa, ny fonosana misy tadiny dia natao hametahana takanty na tehina ho an'ny hazo, valindrihana na rindrina. Ary nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao izy ireo, indrindra any Amerika Avaratra, Amerika atsimo, Moyen Orient ary Azia.
Amin'ny maha-iray amin'ireo mpifaninana mpifaninana indrindra amin'ny orinasa, ny paffle waffle dia namboarina tamin'ny kaopy suction. Ary nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao izy ireo, indrindra any Amerika Avaratra, Amerika atsimo, Moyen Orient ary Azia. Ankoatr'izay, mora ny fametrahana an-tsaha.